ह्याम्सका अध्यक्ष भन्छन्– हामीलाई विश्वास गर्नुस, अब उपचारका लागि कोही विदेश जानुपर्दैन – Welcome to HAMS Hospital
internal & Preventive Medicine
ह्याम्सका अध्यक्ष भन्छन्– हामीलाई विश्वास गर्नुस, अब उपचारका लागि कोही विदेश जानुपर्दैन
९ असोज,काठमाडौं । २० वर्षअघि मेडिकल उपकरण सप्लाइ व्यवसायीका रुपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रवेश गरेका रामशरण भण्डारीको परिचय अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल सन्चालकका रुपमा फेरिएको छ । ह्याम्स अस्पतालका अध्यक्ष भण्डारीले देशका चर्चित र बरिष्ठ विशेषज्ञ डाक्टरहरुलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरेर सबैलाई अचम्मित पारेका छन् ।
डा.भगवान कोइराला,डा.अर्जुन कार्की,डा भोला रिजाल जस्ता रिजेण्ड डाक्टरहरु अब ह्याम्स अस्पतालमा भेटिनेछन् । दुई दशकअघि डा.उपेन्द्र देवकोटा र मधु घिमिरेले स्थापना गरेको ह्याम्स अस्पताललाई उनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको संरचना र प्रबिधि सहितको अस्पतालमा फेरेर धुम्बाराहीमा बिस्तार गरेका छन् ।
सिन्धुपाल्चोकमा जन्मिएका युवा व्यवसायी भण्डारीले खाडिचौरमा सिन्धु सदावहार अस्पताल सन्चालन गरेर स्वास्थ्य सेवामा हात हालेका थिए । पछिल्लो समय ह्याम्स अस्पतालमा ठूलो लगानी सहित किन आए ? हामीले उनीसँग यहिँबाट कुराकानी शुरु गरेका छौं ।
यति ठूलो अस्पताल के सोचेर हात हाल्नुभयो ?
हाम्रो देशमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुनुपर्ने जुन विकास हो त्यो भएको छैन । जनताको मौलिक हक भनिएको छ शिक्षा र स्वास्थ्य । तर जनताको पहुँचमा अझै छैन । मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले सिन्धुपाल्चोक आफ्नो होमटाउन पनि भएकाले एउटा सानो अस्पताल शुरु गरेँ । मेरो व्यवसाय भनेकै डाक्टरहरुसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध सम्पर्क हुने भएकाले त्यहाँका मान्छेले लौन एउटा अस्पताल खोलौं भन्नुभयो । सिन्धुपाल्चोकको खाडिचौरमा सिन्धु सदावहार अस्पताल खोलियो ।
कम्तिमा त्यहाँ अस्पताल खोल्दा त्यस क्षेत्रका मान्छेको अकालमा ज्यान जाने अवस्था नआवस भनेर गरिएको हो । त्यो अस्प्तालले मलाई धेरै दुःख दियो तर अनुभव पनि दियो । जुरेको पहिरो जाँदा पूरै अस्पताल खाली गर्नुपरेको थियो । चलिरहेको अस्पताल जिरोमा आयो । फेरि अस्प्ताल चलायौं तर भूकम्पले पूरै भवन कोल्याप्स भयो । यति दुःख हुँदा पनि मैले त्यो अस्पताल चलाउनैपर्छ भनेर ६ महिनाभित्र आफ्नै भवन बनाएर अस्पताल चलाइयो ।
मैले सिकेको कुरा चाहिँ,त्यो अस्पताल त्यहाँ भएकै कारण मेरो परिवारका सदस्य बाँचेको अनुभव छ । अस्पतालको महत्व के हो भन्ने कुरा मलाई सिन्धु सदावहार अस्पतालले बुझायो । अनि मैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही ठूलो काम गर्नुपर्छ भनेर सोचिरहेको थिएँ ।
सोच्दा सोच्दै ठूलै आँट्नुभयो होइन ?
नेपालमा निजि जक्षेत्रबाट स्थापित भइसकेका अस्पतालहरुले आफ्नै फाइदाका लागिमात्र गरे । जुनस्तरको सेवा आम मान्छेलाई दिनुपर्ने हो त्यो पुगेन । ती अस्पतालले कमाए राम्रोसँग तर अस्पतालको लागि लगानी गरेर सेवा बिस्तार गरेनन् । जस्तो कि ५० बेडको थियो भने १०० बेडको बनाउनुपथ्र्यो । तर उनीहरुले त्यसबाट कमाएमात्र,सेवा बिस्तार गर्नेतिर लागेनन् । जति छ त्यतिमै बस्ने,लगानीबाट आएको मुनाफा कमाउनेमात्र ध्यान गयो ।
मैले यहि क्षेत्रमा काम गरिरहँदा जुन कुरा महशुस गरेँ त्यसपछि केही नयाँ गर्नुपर्छ भन्ने सोचिरहेको थिएँ । रोग पत्ता लगाउनलाई डाक्टर र प्रबिधि दुवै राम्रो हुनुपर्छ,यस कुराको प्रयोग गरौं भन्ने मैले सोचिरहेको थिएँ । हुन त केही अस्पताल ग्राण्डी,मेडिसिटीहरु नआएका होइनन् तर यतिले पुगेन भन्ने लागेर ह्याम्सलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउँ भनेर लागियो ।
अहिले कतिपय अस्पतालले आफैलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तारको भनिरहेका छन, अस्पतालको मापदण्ड नाप्ने कसरी हो ?
तीनवटा कुराले अस्पतालको गुणस्तर मापन गर्न सकिन्छ । एउटा कुरा त अस्पतालको भौतिक संरचनानै हो । जति अत्याधुनिक उपकरणहरु ल्याए पनि अस्पतालको भौतिक संरचना त्यो प्रबिधि र उपकरणलाई राख्ने र व्यवस्थापन गर्ने भएन भने त्यसले काम गर्न सक्दैन ।
दोस्रो कुरा भनेको प्रबिधिनै हो । आजको दिनमा मेडिकल साइन्सले पत्ता लगाएका नयाँ भन्दा नयाँ प्रबिधि हामीले ल्याउनैपर्छ । संसारमा चलेको र संसारले चिनेका जानेका प्रबिधिनै चाहिन्छ । हामीले ती प्रबिधि प्रयोग गर्नैपर्छ ।
तेस्रो भनेको ती प्रबिधि र उपकरण चलाउन जान्ने जनशक्ति र विशेषज्ञ डाक्टरनै हो । प्रबिधि र उपकरणपनि शतप्रतिशत सही हुन्छ भन्ने छैन । मेडिकल साइन्समा कतिपय कुराहरु चाहिँ कमन सेन्सले पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यो अनुभव प्राप्त विशेषज्ञ डाक्टरहरु चाहिन्छ ।
यी तीनवटा कुरा भएपछि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने र पाउने ग्यारेन्टी हुन्छ । जुन कुरा ह्याम्स अस्पतालले दिनेछ ।
तपाईहरुले लक्षित गर्नुभएको वर्ग चाहिँ कुन हो ?
हामीले अस्पताल बनाउदाखेरिनै अस्पतालको अन्तर्राष्ट्रिय स्टाण्डर्ड एनएबिएच फलो गरेका छौं । यो एनएबिएच फलो गरेर त्यहि लेबलको परामर्शदाता हायर गरेर हामीले भौतिक संरचना बनाएका छौं । यसका साथै देशले चिनेका बरिष्ठ विशेषज्ञ डाक्टर साबहरुको सल्लाह अनुसार यो अस्पतालको संरचना तयार भएको छ । त्यो भनेको के हो भने,हामीले घमण्डका साथ भन्नुपर्छ हाम्रो अस्पतालको स्टाण्डर्ड भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तर र मापदण्ड पूरा गरेका अस्पताल हो ।
हामीले अन्ततर्राष्ट्रिय मापदण्ड फलो गरेर बनाएका छौं । एनएबीच मापदण्डको अस्पताल भएकाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा ह्याम्स अस्पतालले दिनुपर्छ । हामीले एनएबीचमा जाने क्रममा रहेकाले सबै सेवा विश्वस्तरकै अस्पतालको दिनुपर्छ । हाम्रो लक्षित वर्ग भनेर कुनै किटान गरेका छैनौं । यहि लेभलको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा सुबिधा जडित नेपालमा अरु जति अस्पताल छन् ती भन्दा यहाँ हामी सस्तोमा उपचार सेवा दिनेछौं ।
यहि स्तरका अस्पताल मध्ये ह्याम्समा कम्तिमा १५देखि २० प्रतिशत कम हुनेछ । स्याउ किन्न जानुभयो भने बजारमा सय रुपैयाको पनि पाउनुहुन्छ, पाँच सय रुपैयाको पनि पाउनुहुन्छ । आम मान्छेको पहुँचभन्दा बाहिर अस्पताल हुनेछैन । त्यसैले कुनै पनि लक्षित वर्ग भन्दा पनि आम नेपाली जनतालाई सहज र सुलभ ढंगले देशभरका नाम चलेका सबै विशेषज्ञ डाक्टरहरुले एकै छानामुनीबाट उपचार सुबिधा दिन गरि अस्पताल सन्चालन गरेका छौं ।
नेपालमा अस्पताल खुलिरहेका छन् तर मान्छे अहिले पनि रोग पत्ता लगाउनकै लागि दिल्लीका अस्पतालमा भिड लागिरहेका छन् किन ?
यो क्रम अहिले शुरु भएको होइन । आजभन्दा दुई चार वर्षअघि म पनि सिरियस खालको रोगको उपचार यहाँ गर्दैन थिएँ । बिगतमा त्यो अवस्था थियो । तर अहिले अहिले नेपालमा राम्रा र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका अस्पताल आएका छन् । अब विदेशमा रोग पहिचानकै लागि जाने क्रम रोकिनुपर्छ र केही हदसम्म रोकिएको पनि छ । हामीसँग भएका केही डाक्टरसाबहरुको स्टेटमेन्टनै के छ भने,म आफ्नै अप्रेसन गर्नुपर्ने भयो भने ढुक्कसँग टेबुलमा ढुक्कले सुत्न पाउने अस्पताल हाम्रो लागि पनि चाहियो नि ।
त्यो चीजलाई म्याच गर्ने ढंगले यो अस्पताल बनेको छ । अब रोग डायग्नोसिसकै लागि कुनै पनि नेपालीले विदेश जानुपर्दैन । उपचारका लागि विदेश जानु पर्दैन । हामीलाई विश्वास गर्नुस । ह्याम्समा आबद्ध डाक्टरसाबहरुलाई सबैले चिनेका छन् र उपचार यहीँ सम्भव छ । ह्याम्स अस्पताललाई हामीले नेपालको टप फाइभभित्र पार्छौ र पार्ने गरि बनेको छ ।
देशका कहिलएका चर्चित डाक्टरहरु जम्मा गर्नभयो,त्यो चाहिँ कसरी ?
यो चाहिँ संयोग भन्नुपर्छ । म आफूलाई फर्केर हेर्दा सामान्य व्यक्ति हुँ । धेरै दुःख गरेर गाउँबाट आएँ । आजसम्म काम गर्दा मैले विश्वास आर्जन गरेको रहेछु भन्ने लाग्यो । आज मैले अस्पतालको लिड गरिरहँदा,हिजो जो डाक्टरसँग बोल्न डराउँथे भने आज उहाँहरु मसँग मिलेर काम गर्न आउनुभएको छ । त्यो त मेरो काममा उहाँहरुलाई विश्वास भएरमात्रै हो ।
मेरो २० वर्षको इतिहास हेरेर विश्वास भएरै मिलेर गरौं भन्नुभएको हो । म कर्ममा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ । मेहनत गर्दै जाँदा भयो भने ठिकै छ,नभए पनि केही छैन भन्ने खालको मान्छे म हुँ । आज बरिष्ठ र चर्चित डाक्टरहरु जसको नाम लियो भने पनि विरामीहरुले राहत महशुस गर्छन्.,उहाँहरु यहाँ जोडिनुभएको छ । यसले पनि ह्याम्सको स्तर आफैं प्रष्ट पार्छ । उहाँहरु सबैले जनतालाई सेवा पनि दिउँ र एउटा भरोसायोग्य अस्पताल भोलि आफैंलाई पर्दा पनि होस भनेर एक ठाउँमा आउनुभएको छ ।
नेपालमा निजी अस्पताल धेरै भएनन् र ?
नेपालमा भएका प्राइभेट अस्पताल र ती अस्पतालको बेड संख्या हेर्ने हो भने यस्ता अस्पताल अरु दशवटा आउनुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य संगठनको पनि प्रतिवेदन हेर्नुहोला हाम्रो जनसंख्याको अनुसार अस्पताल पर्याप्त छैनन् । हामीलाई ह्याम्स जस्ता अरु धेरै अस्पताल खाँचो छ । त्यसैले कुनै खतरा हामीले महशुस गरेका छैनौं । बरु सातै प्रदेशमा पनि एक एकवटा अस्पताल खोल्नपुर्छ भन्ने लक्ष्य राखेका छौं ।
प्राइभेट अस्पतालले दिनुपर्ने सेवा र विरामीको संख्यामा हामीलाई शंका छैन । हामीले सरकारलाई सघाउने हो । सरकारी अस्पतालको सेवा सुबिधा विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि भनाइ हो । हामीले सरकारको कानुन नियम पालना गरेरै जनतालाई सेवा दिने हो । हामीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको इमरजेन्सी ब्याक दिने गरि सातै प्रदेशमा त्यस्ता अस्पताल चलाउनुपर्छ ।
सातवटा प्रदेशमा सातवटा अस्प्ताल ह्याम्सकै आउटलेटमा कम्तिमा १५ बडका अस्पताल चलाउनुपर्छ भन्ने सोचेका छौं । आउटलेट भनेर ठूलो अस्पताल हुँदैन तर हाम्रो सेटअपमा हाम्रो अस्पतालमा आइसकेपछि त्यो विरामीलाई ठूलो सेन्टरमा उपचारका लागि पु¥याउने लेबलको इमरजेन्सी सेवा दिनेछौं । हामीसँग हेलिकोप्टर सेवा हुनेछ । किनकी हामीले यो भवन बनाउँदै हेलिप्याड सहितको बनाएका छौं ।
ह्याम्सले नर्सिङ कलेज पनि चलाएको छ होइन ?
हामीले नर्सिङ चलाइरहेका छौं । हाम्रो चाहना अलिकति एकेडेमिक कोर्ष पनि चलाउँ भन्ने हो । हामीसँग भएका फ्याकल्टी डाक्टरहरु प्राज्ञिक हिसाबले एकदमै साउन्ड हुनुहुन्छ । डा अर्जुन कार्की,डा.भगवान कोइराला,डा. भोला रिजालहरु हुनुहुन्छ ।
अहिले जुन चिकित्सिक शिक्षा बिधेयक बनेको छ,त्यसभित्र के छ भन्दा जति पनि अहिले एमबिबिएस डाक्टर देशमा उत्पादन हुन्छन्,तीनले एमडी लेबलको पढाइको सिट संख्या छैन । अहिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकले के तोकेको छ भने,एउटा प्राइभेट अस्पताल जहाँ फ्याकल्टी पुग्छ र विशेषज्ञ डाक्टर हुनुहुन्छ तथा विरामीको चापले यदि म्याच गर्छ भने एमडी लेबलको पढाइ गर्न मिल्ने कन्सल्ट्यान्ट कोटा पाउने भनिएको छ ।
त्यो बिधेयकबाट त्यो खालको प्राज्ञिक कार्यक्रम दिन सक्ने प्राबधान खुला छ । यदि देशले त्यो कुरा अघि बढाएको अवस्थामा त्यो एमडी लेबलको पढाइको कार्यक्रम लिन चाहान्छौं ।
जोर्नी प्रत्यारोपणः हिँडेर घर जाँदाको मज्जा ! लाइफ चेञ्जिङ उपचार
Dr. Sushma Bhattachan, Consultant MD, MS ENT & Head and Neck Surgery ENT Department
Ms. Baruna Paudel, Nursing Director
स्पाइन सर्जरीका अब्बल युवा डाक्टर प्रशान्त अधिकारी
निजि क्षेत्रबाट ‘इर्मेरजेन्सी नर्सिङ तालिम’ शुरु गर्ने पहिलो बन्दै ह्याम्स अस्पताल
एपेन्डिसाइटिस भनेको के हो ? यसबाट कसरी बच्ने ?
जोर्नी दुखाइका भ्रम र सही उपचार
HAMS Family Congratulates Dr. Rakshya Pandey
TRUSTED COVID TESTING CENTER “ A – level Laboratory ”
HAMS is privileged to have signed MOU with Sasto Deal
Mandikhatar Road, Dhumbarahi, Kathmandu, Nepal